wai's Likes - Myanmar Network
Back to wai's Page
Admin တစ်ယောက်အဖြစ် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်တော့မည… Admin ဌာန စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ များစွာသော ကုမ္ပဏီများ၏လုပ်ငန်းတိုင်းမှာ Admin. department လည်း လိုအပ်မှာပါ။ - ကုမ္ပဏီကချမှတ်တဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ထိန်းသိမ်းဖို့၊ - ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတေ… Discussion Admin တစ်ယောက်အဖြစ် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်တော့မည…4Likes
ရုံးမလာနိုင်ကြောင်း ခွင့်စာနမူနာများ [Zawgyi]သင်အလုပ်လုပ်နေသရွေ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ခွင့်ယူရမည်မှာ ဧကန်မုချပင်ဖြစ်သည်။ မြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးသားသည့်အခါ မခက်သော်လည်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားသည့်အခါ ရေးနေကျမဟုတ်ပါက အခက်အခဲရှိနိုင်ပါသည… Discussion ရုံးမလာနိုင်ကြောင်း ခွင့်စာနမူနာများ 46 Likes နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်ကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချ… [Zawgyi] ဆောင်းအငွေ့အသက်တဖြည်းဖြည်းကုန်ဆုံးသွားမှုနှင့်အတူအပူရှိန်ကလည်း တရှိန်ရှိန်မြင့်တက် လာလျက်ရှိသည်။ ပညာသင်နှစ်တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးပြီး အတန်းတင်စာမေးပွဲများလည်း စစ်ဆေးပြီးဖြစ်၍ အခြေခံ ကျောင်းများသည်ေ… Discussion နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်ကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချ… 12 Likes စာသင်ခန်းထဲကအင်္ဂလိပ်စာအလွဲများ “ဆရာရေ စာနည်းနည်း မေးချင်လို့ပါ” “သြော်….အေးမေးလေ” “ဟိုတစ်နေ့က ရွှေတိဂုံဘုရားစောင်းတန်းမှာရှိတဲ့ ပန်းချီကားတွေကြည့်နေတုန်း နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်က လာမေးတယ်ဆရာ”“ဟေ ဘာမေးတာလဲဟ ကြည့်ရတာ မင်းကို ဧည့်လမ်းည… Discussion စာသင်ခန်းထဲကအင်္ဂလိပ်စာအလွဲများ 68 Likes
အိုးမကွာ အိမ်မကွာ အလုပ်မပျက် English လေ့လာ [Zawgyi] မကြာခဏ ဆိုသလို ကြုံကြိုက် တိုက်ဆိုင်တိုင်း အမေးခံရတဲ့ မေးခွန်း တစ်ခု ရှိပါတယ်။ သူတို့ မေးတာက အင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်စကား တတ်လည်း တတ်ချင်တယ် ... သင်တန်းတွေဘာတွေ တက်ဖို့လည်း အခြေအနေ မပေးဘူး ... ဘယ်လ… Discussion အိုးမကွာ အိမ်မကွာ အလုပ်မပျက် English လေ့လာ 81 Likes လူငယ်နဲ့ MLM အန္တရာယ် "လစဉ် ဝင်ငွေ နှစ်သိန်းကျပ်မှ ဆယ်သိန်းကျပ်အထိ ရနိုင်သည်" ဆိုတဲ့ အလုပ်အကိုင်ကြော်ငြာကို ကိုဇော်သန်း တွေ့လိုက်ရချိန်မှာ အတော့်ကို စိတ်ဝင်စားမိသည်။ ဒီကြော်ငြာကို ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် လူမှုကွန်ယက် အချိန်ပိုင်းအလုပ… Discussion လူငယ်နဲ့ MLM အန္တရာယ် 62 Likes ငါးလည်းမျှားမယ်၊ ရေလည်းချိုးမယ် [Zawgyi] စာရေးသူတို့ လူငယ်တို့ သည် မည်သည့်ရာစုနှစ်နှင့်မှ မတူတော့ဘဲ အရာရာတွင်တိ်ုးတတ်ကာ တစ်ခါမှမရှိဖူးသော အကျင့်မျိုးများရှိလာကြပြီဖြစ်သည်။ စာရေးသူတို့လူငယ်အများစုတွင်ရှိလေ့ရှိတတ်တဲ့ အကျင့်သုံးမျိုးေ… Discussion ငါးလည်းမျှားမယ်၊ ရေလည်းချိုးမယ် 33 Likes တာဝန်ယူစိတ် လူသားတိုင်း တာဝန်ကိုယ်စီရှိသည်ကို သိသည်။ သို့သော် တာဝန်ယူရမှန်း မသိ။ အသိသည် အသိသာဖြစ်သည်။ တစ်ချို့တွေက တာဝန်ရှိမှန်းပင် မသိကြ။ တစ်ချို့ တစ်ချို့တွေက တာဝန်ရှိမှန်းလည်း သိသည်။ တာဝန်ယူရမှန်းလည်… Discussion တာဝန်ယူစိတ် 22 Likes မသိသာသောခြားနားချက်များ - Road နှင့် Street,… "Road" နှင့် "Street" ကြား ဘာခြားနားပါသလဲ "Road" ဆိုတာကတော့ ပုံမှန်အားဖြင့် ပို၍ ဝေးကွာတဲ့နေရာ နှစ်နေရာကြားရှိ လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Street ကတော့ မြို့ကြီး (City)၊ မြို့(town) သို့မဟုတ် ရွာထဲမှာ ခင်… Discussion မသိသာသောခြားနားချက်များ - Road နှင့် Street,… 30 Likes လက်မှုမှသည် အနုပညာဆီသို့ - မြန်မာ့ လက်မှုအနုပ… လက်မှုအနုပညာဖန်တီးမှု လက်ရာအသစ်များကို ခင်းကျင်းပြသမည့် လက်မှုမှသည် အနုပညာဆီသို့ - မြန်မာ့ လက်မှုအနုပညာပြပွဲနှင့် အရောင်းပွဲတော်ကြီးကို ဗြိတိသျှကောင်စီ၊ SDC (Swiss Agency for Development and Cooperation… Discussion လက်မှုမှသည် အနုပညာဆီသို့ - မြန်မာ့ လက်မှုအနုပ…4Likes
လက်အောက်ဝန်ထမ်းများနှင့် စည်းချက်ကျကျ အလုပ်လ… [Zawgyi]လုပ်ငန်းခွင်ဆိုသည်မှာ လူအမျိုးမျိုး၊စိတ်အထွေထွေဖြစ်သောကြောင့် ရံဖန်ရံခါ စိတ်အနှောင့်ယှက်ဖြစ်ကြရ သည်။တစ်အူထုံဆင်း ညီအကိုမောင်နှမများပင် စိတ်အခန့်မတွေ့ပါက စိတ်သဘောထားကွဲလွဲတတ်ကြသည်မှာ ဓမ္မတာပင်ြ… Discussion လက်အောက်ဝန်ထမ်းများနှင့် စည်းချက်ကျကျ အလုပ်လ… 31 Likes Çatalhöyük (သို့မဟုတ်) ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးမြို့ Jericho မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်၊ သည်နေ့ တူရကီနိုင်ငံရဲ့ အနာတိုလီယာလွင်ပြင်ထဲက ဂျုံ၊ မုယောစပါးနဲ့ ပြောင်းစိုက်ခင်းတွေကြားမှာ ထိုးထွက်နေတဲ့ တောင်ကုန်းတချို့ကိုတွေ့နိုင်တယ်။ ကျောက်ခေတ်နှောင်းပိုင်းကာလက သည်တော… Discussion Çatalhöyük (သို့မဟုတ်) ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးမြို့ 29 Likes ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး အောင်မြင်ဖို့ အပြောင်းအလဲလေ… [Zawgyi]သင့်ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး အောင်မြင်ဖို့ အပြောင်းအလဲလေးနည်းနည်း လုပ်ချင်ပါသလား။ လူတွေဟာ သူတို့ဘ၀တွေကို ပိုပြီးတိုးတက် ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ဘယ်ကစပြီး လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတော့… Discussion ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး အောင်မြင်ဖို့ အပြောင်းအလဲလေ… 57 Likes
မန်နေဂျာလား… ဟောက်ဆာဂျင်လား… လုပ်ငန်းခွင်တိုင်းတွင် လုပ်ငန်းအောင်မြင်အောင် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုဖို့အတွက် စီမံခန့်ခွဲသူတွေ ရှိရစမြဲဖြစ် ပါသည်။ လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲနဲ့ လုပ်ဆောင်လို့ မရနိုင်ဘူးဆိုတာ လုပ်… Discussion မန်နေဂျာလား… ဟောက်ဆာဂျင်လား… 39 Likes အရောင်များဖြင့် အသံသင်ခြင်း ဒီဆောင်းပါးက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား သင်ကြားသင်ယူနေသူ၊ အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ်အသံထွက် သင်ကြားသင်ယူနေသူ ဆရာဆရာမများ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဘာသာစကားတစ်ခုကို လေ့လာသူတွေအတွက် အသံထွက်မှန်မှန် စနစ… Discussion အရောင်များဖြင့် အသံသင်ခြင်း 31 Likes
သင့်အတွက် အလိုအပ်ဆုံးအရာက ဘာလဲ လူသားတွေရဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်ကြီးတွေထဲမှာအရေးကြီးဆုံးက ၀င်ငွေ (Income) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အရေးကြီးဆုံး ၀င်ငွေကို ရှာဖွေကြရာမှာ နည်းလမ်းနှစ်သွယ်ရှိပါတယ်။ ၀င်ငွေလုံးဝမရှိသေးသူများဟာ အလုပ်အကိုင် (Job) တစ်… Discussion သင့်အတွက် အလိုအပ်ဆုံးအရာက ဘာလဲ 23 Likes
အချစ်တဲ့ လူရယ်လို့ဖြစ်လာကြတဲ့အခါ ကလေးဘ၀အချိန်ကတည်းက အချစ် ဆိုတဲ့စကားလုံးကို မကြာခဏကြားနေရတာပေါ့။ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကို စိတ်ဝင်စားမှုတွေဟာ ထင်ထင်ရှားရှား ပွင့်အန်လာတတ်တာ ဓမ္မတာပါ။… Discussion အချစ်တဲ့ 188 Likes
သုံးနှုန်းမှတ်သားဝေါဟာရများ-၃ မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာကို accident လို့ဆိုပါတယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပုံတွေကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက် အခေါ်အဝေါ်တွေလည်း အဖုံဖုံရှိလာပါတယ်။ ၁။ At home, at work, when doingasport, etc. - အိမ်၊ အလုပ်စသည်မှာအ… Discussion သုံးနှုန်းမှတ်သားဝေါဟာရများ-၃ 52 Likes
dog အသုံးအနှုန်းများ ဒီ forum မှာ တစ်ယောက်ယောက်ရေးထားဖူးသလားတော့မသိပါဘူး။ ရှိရင်တော့ နှစ်ထပ်ရှိတော့ မှတ်မိတာပေါ့လို့ နှလုံးမူပြီးဖတ်ကြည့်ကြပါဦး။ မြန်မာစကားမှာခွေးကို မကောင်းတဲ့အနက်နဲ့တွဲဖက်သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ “ခွေးကျင်… Discussion dog အသုံးအနှုန်းများ 85 Likes ရှုမြော်ကာငေး ကျောက်ဖြူမြို့အလှလေး ကျွန်တော်က ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ပါ…/လုပ်ငန်းတာဝန်ကျရာနေရာတွေကို သွားနေရတာပါပဲ အခုလည်းကြည့်……….. ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ Myanmar-China Gas Pipeline လုပ်ငန်း Project မှာ ကျွန်တော်တို့… Discussion ရှုမြော်ကာငေး ကျောက်ဖြူမြို့အလှလေး 28 Likes
Who Moved my Chese?(မပြောင်းလဲရဲကြဘူးလား။) Dr. Spencer Jhonson ရေးခဲ့တဲ့ Who Moved my Cheese? ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ ထွက်ထားတာလည်း ကြာပါပြီ။ ဘ၀ တစ်ခုအတွက် လက်တွေ့ အသုံးဝင်နိုင်တဲ့ ပုံပြင်လေး တစ်ပုဒ်အပေါ်မှာ အခြေခံပြီး လက်တွေ့ ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ ဆက်စပ်… Discussion Who Moved my Chese?(မပြောင်းလဲရဲကြဘူးလား။)9Likes